“Antonio Conte waa macalinka ugu fiican adduunka” – Lukaku – Gool FM
“Antonio Conte waa macalinka ugu fiican adduunka” – Lukaku
Dajiye August 9, 2019
(Serie A) 09 Agoosto 2019. Weeraryahanka cusub kooxda Inter Milan ee reer Belgium Romelu Lukaku ayaa xaqiijiyay inuu ku faraxsan imaatinkiisa naadiga Nerazzurri.
Kooxda Inter ayaa si rasmi ah kula soo saxiixatay weeraryahanka kooxda Man United ee Romelu Lukaku adduun lacageed dhan 80 milyan oo euro.
Lukaku ayaa wareysi uu ku bixiyay website-ka rasmiga ah ee kooxda Inter Milan wuxuu ku sheegay:
“Waxaan halkan u imid sababtoo ah waxaan ku qanacsanahay mashruuca kooxdan, waa koox balan qaad leh, isla markaan dooneysa in markale ay dagaalanto waana waxaan doonayo, waxaan doonayaa inaan ka caawiyo in la dhiso kooxda mustaqbalka”.
“Aniga ahaan wax walba oo halkan ku sugan waxay iga caawinayaan sidii aan horumar ku sameyn lahaa, waxaana rajeynayaa inaan ka caawiyo asxaabteyda kooxda marka aan ku jirno shaqada adag, taasina waxay ku imaan kartaa in la qabto shaqo adag maalinba maalinta kasii dambeysa, natiijadana waxay noqon doontaa mid aad u wanaagsan dhamaadka xili ciyaareedka”.
“Aniga ahaan, Antonio Conte waa macalinka ugu fiican adduunka, wuxuu horumarin karaa dhamaan ciyaartooyda waqti kasta, taasna waxaad ku arki kartaa taariikhdiisa”.
“Waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan uga mahadceliyo Madaxweyne Zhang Kangyang iyo Maareeyaha Guud ee Giuseppe Marotta kalsoonida ay ii muujiyeen iyo inay halkan i keeneen, runtiina aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku biiro kooxdan quruxda badan”.
RASMI: Man City oo shaacisay in heshiis cusub ee waqti dheer ay ka saxiixatay mid ka mid ah xiddigaheeda ugu muhiimsan
Miyeey ka qeyb galayaan Harry Maguire iyo Pogba kulanka Chelsea? – Waxaa ka jawaabaya Tababare Solskjær